လူ ၂၅၀၀ ရရင် ဗမာတွေ အလင်းပွင့်ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » လူ ၂၅၀၀ ရရင် ဗမာတွေ အလင်းပွင့်ပြီ
Posted by ဂျစ်စူ on Dec 6, 2010 in Health & Fitness | 15 comments
U yaw thu
မကျနော်က အင်တာနက်အသုံးပြု၍ ကုသိုလ်ယူလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
မြန်မာတွေကူညီကြမည်ဟုလဲ ယုံကြည်၍ ဖော်ပြအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။
အမြင်အာရုံများစူးရှထက်မြက်စေရန်၊ အမြင်အာရုံများ ကြည်လင်ပြတ်သားလာစေရန်၊ အမြင်အာရုံများအေးမြတောက်ပလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ စက္ခုအလင်း မှုန်ဝါးခြင်း၊ တိမ်စွဲခြင်းတို့ကို ကျွန်တော်တို့ နိုင်သလောက် စွမ်းဆောင်ဖေးမကုသပေးခဲ့သည်မှာ (၂၀၀၇) ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ ယနေ့အချိန်ထိ မျက်စိဝေဒနာရှင်ပေါင်း (၁၂၀၀၀) ယောက် ကျော်တို့အားကုသခွဲစိပ် ပေးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
 Digital Slit Lamp 5704 US$ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
 KeratoRefractometer 10025 US$ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
 Biometry Machine 7698 US$ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
 OT Table (EYE) 4480 US$ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
 Surgeon Chair 101 US$ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
 Spot Light 2439 US$ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
 Cataract Surgical Set (4 – Set) 1724 US$ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
 Eye Minor Surgical Set (4 – Set) 1752 US$ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
 Operatin Microscope (Motorized) 12348 US$ (လက်ရှိပေါက်ဈေး)
အညာနွေတမာမြေ မှ တစ်ဆင့်ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
အောက်က ကို zawana ရဲ့ Comment မှပဲကူးယူဖော်ပြပါတယ်ခင်ဗျာ။
F.F.S.S (Yangon), No. (13-A), Bo Mhu Ba Htoo Road
Yangon, Myanmar, 48th Quarter (U-9), North Dagon Township
Phone:, 581363, 580133, 583514, 09.5148452 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
မျက်စိအလှူ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး စင်္ကပူ က လှူဒါန်းလိုသူတွေ အောက်ပါ စာနာသူများအဖွဲ့ မှစေတနာရှင်များထံ စိတ်ချ ယုံကြည်စွာလှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း
ဒီအစီစဉ်လေးကတော့ အောင်မြင်မှာသေခြာတယ်ဗျို့ 
BOX နံပါတ်လေး ထည့်ပေးပါ
ကျနော်လဲ တနိုင်တပိုင် ပါ ချင်ပါတယ်
Thank everyone so much for your interest in donating for the people in need. Thank Ko Gyi for posting direct donation contact of FFSS on behalf and you can also donate to the group called Sympathizers in Singapore mentioned in earlier and also in the note. They have been collecting donation in Singapore and send money over to FFSS every month. Thank you so much for you help, Sympathizers in Singapore. (Kyaw Thu)
Facebook ပေါ်က ကိုကျော်သူ fanpage မှာ တွေ့ရလို့ပါ။
စိတ်ဝင်စားကြသောစေတနာရှင်များအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဝေးမှကူညီလှူဒါန်းလိုသူများနီးစပ်ရာလူကြုံ၊ငွေပို့ စံနစ်တို့ ဖြင့်ပေးပို့ လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်းနှင့်ဆက်သွယ်လိုပါက… F.F.S.S (Yangon), No. (13-A), Bo Mhu Ba Htoo Road
ပြည်တွင်းပြည်ပ က လူတွေ တယောက်ကို ဒေါ်လာ ၁၀ လှူရင် ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့ စိတ်ကူးလေး ကောင်းပါတယ်။ ဒီမှာ စာရေးတာ ဒေါ်လာ ၁၀ မက ရနေပါပြီ။ တဆင့် ကိုယ်စား စုပေါင်း လှူပေးမဲ့ သူ ရှိရင် ဆူး လည်း ဒီက ပွိုင့်ကို လှူ ချင်ပါတယ်။ သူကြီးရေ အဆက်အသွယ်ရှိရင် စာရင်းထဲက နုတ်ပြီး အလှူ ထည့်ပေးပါလား။
ရန်ကုန်ကလူတွေတော့ ဦးကျော်သူရဲ့ ရုံးကိုသွားပြီးလှူလို့ ရတယ်
နယ်ဝေးရပ်ခြားက လူတွေတော့ အခက်အခဲနဲနဲရှိတယ်ထင်တယ်
သူ့ ဟာသူ ဖြစ်သွားမှာပါ
ဆူး တွေးမိတာကလေ.. ဒေါ်လှတွေ ပေါင်းပြီး စက်တလုံး အဲဒီက ၀ယ်ပေးတာမျိုး လုပ်ချင်ရင် လုပ်လို့ရအောင်ပါ။ ကလေး ဆန်သွားလား မသိဘူးနော်။ ဘာပဲပြောပြော.. ဒီမှာ ဦးဆောင် အလှူခံပေးမဲ့ သူ ရှိရင် ပွိုင့်လှူပေးမယ်။
ဒေါ်လှမရှိလို့ ရန်ကုန်မှာပဲ ဗမာငွေနဲ့ သွားလှူလိုက်တော့မယ်နော် … ပွိုင့်တွေကို လှူလို့ရမယ်ဆိုရင်လဲ လှူချင်ပါတယ် …
ကျမလည်း လှူချင်ပါတယ် … ဘယ်မှာလှူရမလဲ ပြောပေးပါဦး ။ အစိမ်းတွေ ၊ FEC တွေက ဈေးကျနေတော့ မြန်မာငွေပဲလှူတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော် ။ တခြား ရွာသားတွေလည်း တက်အားသရွှေ့ ကုသိုလ်ယူကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်နော် ။
ပြည်ပက MG member တွေ အနေနဲ့ ကိုယ်လှူနိုင်သလောက် ပွိုင့်တွေကို ပြည်တွင်းက Member တစ်ဦးကို စုပြီး လှူလို့ ရရင် ကောင်းမယ်။ ရန်ကုန်က Member တစ်ဦးက လက်ခံပေးနိုင်ရင်ပေါ့။ ကူညီမဲ့ သူများရှိရင် ပြောကြပါ။
Admin များဘက်ကလည်း အကြံဥာဏ်ပေးကြပါ။
ပစ္စည်းကို ပြည်တွင်းမှာ ၀ယ်မှာလား .. ပြည်ပက သွင်းမှာလား ..
ပြည်တွင်းဆိုရင် ဘယ်သူ တာဝန်ယူပြီး ပွိုင့် စုမှာလဲ .. ပြည်ပ ဆိုရင်ဘယ်သူ့ကို လွှဲရမှာလဲ ..
လှူချင်ပါတယ် .. ကိုယ်တိုင် တာဝန်မခံနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ ..
ပြည်တော်မှာ ဒါမျိုးတွေ မထုတ်လုပ်ဘူးလေ။ ဒေါ်လှနဲ့ ပေါက်ဈေး ပြောထားတာ..
ပြည်တွင်းမှာတော့.. ဘယ်သူမှ တာဝန်ခံမဲ့သူ မပေါ်သေးလို့.. လှည့်မေးနေကြတာ။
မင်္ဂလာ ရှိတဲ့ ပို့စ်လေး တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းလိုသူ စေတနာရှင် သူငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့
phone-0332323468 ကို ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော် နိုးဆော်အပ်ပါသည်။